बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका फ्यानहरुका लागि एकदमै दुःखद खबर – Eshankharapur
कुलमान र गोबिन्द केसीको समर्थन गर्दै राजाराम पौडेलको उग्र आ”क्रोश, हेरेको हेरै भए पुण्य
खुशीको खबर: चर्को बि`रो`ध पछी कुलमान घिसिङलाई नै सो पदमा पुनः नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रि परिष`दमा ! सहमत हुनेले शेयर गर्नुहोस
यी ४ ठाउँमा कालो कोठी भएका व्यक्तिसँग कहिलै हुँदैन धनको कमी
दशैमा दु:खद खबर अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य एकाएक अकासिन थालेपछि सर्वसाधारणलाई चुलो बाल्नै मुस्किल
दशैंमा फोर्ड फिगो किन्नेलाई आकर्षक नगद छुट, २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा पनि किन्न सकिने
मृ’त्यु भएकाहरुको छोरी बन्दै सपना१८ वर्षीया सपना रोका मगर पनि मृत शरीरलाई दागबत्ती दिन्छिन् (भिडियो सहित)
म`र्यो भनेर फा’लेको बच्चा ८ घण्टा पछि जीवित देखे पछि सबै च’कित ! हस्पिटलको ला’पर`ही हेर्नुहोस भिडियो
भर्खरै काठमाडौँमा प्रहरी सँग ड’रलाग्दो ल’डाई, मु टु का’प्ने दृश्य, भ`का`भ`क`ढ`ले ! (हेर्नुहोस भिडियो)
मुख्य पृष्ठ /Bollywood News & Updates/बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका फ्यानहरुका लागि एकदमै दुःखद खबर
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका फ्यानहरुका लागि एकदमै दुःखद खबर
काठमाडौं । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका फ्यानहरुका लागि एकदमै दुःखद खबर आएको छ । कालो मृग ऐनको मामलामा अभिनेता खानलाई जिल्ला र सत्र अदालत जोधपुरले २८ सेप्टेम्बरमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
मुद्दामा आज सुनुवाइ भइरहेको थियो । आज, कालो हिरण शि8कार मुद्दा र राज्य सरकारको राजस्थान आर्म्स ऐनको मुद्दाको सुनुवाई सलमानको याचिकामा पूरा हुन सकेन र अर्को सुनुवाईको मितिमा सलमानलाई आफै अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिइयो ।
सलमानले पहिले माफीको लागि अपील गरेका थिए जुन स्वीकार गरियो । अब सलमान २८ सेप्टेम्बरमा राजस्थानको जोधपुर अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा सलमान आउँछन् वा क्षमाको लागि अपील गर्दछन्, त्यो निर्णय भएको छैन ।
अक्टोबर १९९८ मा, जोधपुरमा उनको फिल्म ‘हम साथ साथ है’ को शूटिङको क्रममा, सलमान खानलाई जोधपुर शहरको नजिकैको कंकणी गाउँको बाहिरी क्षेत्रमा दुई कालो हिरणहरूको शि8कार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
झन्डै दुई दशकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ गरिसकेपछि अदालतले सलमानलाई दोषी ठहरायो र उनलाई ५ बर्षको जेल सजाय सुनायो । यस मुद्दामा सह अभियुक्त अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू र सोनाली बेन्द्रेलाई निर्दोष साबित गरिएको थियो ।
सजाय पाएपछि सलमानलाई जेल पठाइयो । तर उनी हाल जमानत मा बाहिर छन् । सलमानले ट्रायल अदालतको यस निर्णयलाई चुनौती दिएका छन ।
त्यस्तै, १९९८ मा, सलमानलाई लाइसेन्स अवधि सकिए पनि ह–तिया–र राखेको आरोप लगाइएको थियो । यसपश्चात सलमानलाई मुद्दामा निर्दोष मानिएको थियो । राज्य सरकारले ट्रायल अदालतको यो निर्णयलाई चुनौती दिएको हो ।
संघर्ष गर्दा गर्दै अस्ताएका सुशान्तको घरमा भेटिए यस्ता प्रमाण
कोरोनामुक्त भएपछि अमिताभले सुरु गरे सुटिङ
सुशान्त प्र’करण: साराको नाम जोडिएपछि करिनाले दिइन यस्तो बयान….
संजय दत्तकी पत्नी मान्यताले शेयर गरिन यस्तो भावुक पोस्ट, भयो भाइरल!
चर्चित नायक नितिनले आज विबाह गर्दै, यि हुन् नितिनसँग लगनगाँठो कस्ने भाग्यमानी सुन्दरी
50 mins अघि